Ukuqhuba ibhizinisi elincane kunzima futhi kuyacindezela. Uhlala ugqoke izigqoko eziningi, ucisha imililo, futhi uzama ukwenza wonke amadola welule ngangokunokwenzeka.
Ugxile kuwebhusayithi yakho, izimali zakho, abasebenzi bakho, amakhasimende akho, nomkhiqizo wakho futhi unethemba lokuthi ungathatha izinqumo ezinhle njalo.
Ngeshwa, ngazo zonke izinkomba abanikazi bamabhizinisi amancane bayadonswa, kungaba nzima ukubeka isikhathi esanele nokunaka ekwenzeni uphawu. Kodwa-ke, ukufaka uphawu lokuthengisa uphawu kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu noma ibhizinisi lakho futhi kungaba nokuthintana okukhulu nombono wokuqala owunika abathengi bakho abazoba khona.
Ingxenye enkulu yombono wokuqala ukuthi uyiphendula kanjani ifoni lapho i-prospect ibiza ibhizinisi lakho. Amabhizinisi amaningi amancane azama ukuzitholela ezishibhile ngesistimu yezingcingo ezingaphansi kobuchwepheshe futhi ngeshwa lokhu kungalimaza okuvelayo kokuqala. Nazi ezinye izinto engizibona ziningi ezingaba yinkinga.
1. Usebenzisa inombolo yakho kamakhalekhukhwini njengenombolo yakho yocingo yebhizinisi. Noma uyi-solopreneur, lokhu akuwona umqondo omuhle. Wonke umuntu angasho ukuthi ushaya nini umakhalekhukhwini, ikakhulukazi uma kuya kuzwi lemeyili futhi unikeza ukubingelela okujwayelekile kwevoyisimeyili yeselula. Inikeza umuzwa wokuthakasela abafonayo kanye nezimpawu zokuthi uyisitolo sendoda eyodwa. Akukho lutho olubi ngokuba yisitolo sendoda eyodwa kodwa ukuyinaka ngale ndlela akulungile.
2. Ukuphendula ifoni ngokuthi "sawubona?" futhi akukho okunye. Uma ngishayela ibhizinisi, ngilindela ukuthi umuntu ophendula ucingo asho igama lebhizinisi elilandelwa ukubingelela okunguchwepheshe. Uma ngishayela umugqa oqondile noma ngisanda kudluliswa, kulungile ukushiya igama lebhizinisi kepha bengingalindela ukuzwa umuntu ephendula ngegama. Inhlonipho yobungcweti futhi isiza ukusetha ithoni elifanele yengxoxo yebhizinisi.
3. Ibhokisi leposi “elijwayelekile”. Uma ufonela ibhizinisi kungabikho ophendulayo, ingabe kwesinye isikhathi uthola ibhokisi leposi lezwi “elijwayelekile” bese kungekho okunye ongakwenza? Ingabe uyethemba ukuthi ukushiya umyalezo kuzoholela empendulweni? Nami angikho. Okokuqala, thola owamukela izihambi (noma okuhle insizakalo yokwamukela abantu). Isimo esihle kakhulu ukuthi abafonayo bazothola umuntu wangempela njalo. Uma ungenaye umuntu owamukela izivakashi, okungenani nikeza umuntu ozisebenzelayo ozovumela umuntu oshayayo ukuthi athole umuntu ofanele okushiyela umlayezo.
4. Ulayini ongamukeli i-voice mail. Lokhu kubi kakhulu kunebhokisi leposi lezwi “jikelele”. Kwesinye isikhathi lapho ngibiza ibhizinisi kungabikho ophendulayo, ngizothunyelwa ekubingeleleni okungitshela ukuthi ngingashiyi i-voice mail ngoba ngeke ihlolwe. Ngempela? Lokhu kumane nje kuwukudelela. Wonke umuntu umatasa futhi uma kufanele ngenze isikhathi sokuphinda ngibuyele ngethemba lokufinyelela kothile, kungenzeka ngidlulele phambili. Ngithole ukuthi amahhovisi ezokwelapha ahlala enecala lalokhu.
5. Insiza eshibhile yeVoIP. Izwi phezu kwe-IP lihle futhi lisuka kude. Kodwa-ke, isengadala ezinye izingqinamba ngekhwalithi yezwi futhi ingadala ukubambezeleka okubonakalayo ezingxoxweni zabantu ababili, futhi. Ngalesi sizathu, akukuhle ukuthembela ku-Skype, Google Voice, noma ezinye izinsiza zamahhala zolayini bebhizinisi abaphambili. Uma uzohamba ngomzila weVoIP, kungcono utshale imali kwisisombululo seVoIP esizokunika umsindo ocacile nokwethembeka. Zimbalwa izinto ezikhungathekisa njengokuzama ukuvala isivumelwano sebhizinisi ngenkathi ulwela ukuxhumana nekhasimende lakho ngezingcingo ezingathembekile.
Akuthathi mzamo omkhulu ukudala isipiliyoni sefoni esisebenzayo kubashayeli bakho kepha kungenza umthelela omkhulu kokuvelayo kokuqala abanakho lapho beshaya. Ngo- I-SpinWeb, sithole ukuthi iqembu elikhulu lama-receptionists + iPhones lisebenza kahle ngathi. Kuyakhokhela ukucabanga ngokuthi ibhizinisi lakho lizwakala kanjani ngobungcweti lapho othile ebiza.
Tags: Ukumakethwa Kwamaselula NethebulethiSesha MarketingWordPress
Oh Uh… IGoogle Imanje Ivula Imboni YASELWANDLE
Feb 22, 2011 ngo-5: 13 AM
UMike - unawo amafoni edeski, noma ingabe uya kuma-iPhones akho?
Feb 22, 2011 ngo-6: 41 PM
Sihambisa konke siye kuma-iPhones. Awekho amafoni edeski amakhulu amabi kithi 🙂
Feb 22, 2011 ngo-7: 48 PM
kulula kangaka kodwa engalandelwa.
Feb 24, 2011 ngo-1: 51 PM
Angivumelani ne- # 1. Lapho uqhuba ibhizinisi elilodwa, akukho lutho olungalungile ngokusebenzisa umakhalekhukhwini njengomugqa wakho oyinhloko. Uma wenza ngokwezifiso ukubingelela futhi uwugcina ungowobuchwepheshe lapho uphendula ifoni, awukho umehluko. Kuyinto elula ukwedlula ukuboshelwa entanjeni yasendlini noma indawo (yebo, ngisho nangabo bonke ubuchwepheshe bokudlulisa izingcingo nokunye okunjalo) futhi kungivumela ukuthi nginikeze ulwazi olungcono, olusheshayo lwenkonzo kumakhasimende ami.
Feb 24, 2011 ngo-2: 37 PM
Ngisebenzise umakhalekhukhwini kule minyaka engu-5 edlule. Ngiyisebenzisa ngoba ulayini ohlukile kunocingo lwasekhaya. Inomyalezo ofana nowebhizinisi, futhi noma nini lapho ngiwuphendula, umngani noma ibhizinisi, ngithi, Sawubona, nangu uLisa Santoro. Angazi ukuthi ngubani umakhalekhukhwini obukade umshayela kodwa lolu lwazi luphelelwe yisikhathi.
Feb 28, 2011 ngo-1: 27 PM
Uma ushayela umakhalekhukhwini bese uthola i-voice mail, kusobala ukuthi kungumakhalekhukhwini osuselwa ekubingeleleni kwevoyisimeyili, ngaphandle kwalapho kwenziwa ngokwezifiso, okuyinto abantu abaningi abangawenzi. Uma ushayela inombolo yebhizinisi yenkampani bese iya kumakhalekhukhwini wezwi le-imeyili, kungaba yisiginali engemihle uma inkampani inentshisekelo yokubheka uchwepheshe. Amanye amabhizinisi ahamba kahle ngesithombe se-solopreneur. Ezinye azikho. Siyabonga ngempendulo yakho! 🙂
Mar 2, 2011 ku-3: 53 PM
ukhona ongancoma insizakalo enhle yeVoIP? noma yikuphi ukubuyekezwa ku-vocalocity?
Mar 2, 2011 ku-5: 04 PM
LJ, ihhovisi lethu elincane belisebenzisa i-Ooma (kufika kwizandiso ezi-4) futhi belijabule.